2009 April ilaa 2019 wuxuu wadaa difaaca Badda Somalia. | RUUG-CADDAA
Posted by Ruugcadaa on March 14th, 2019
Weligeey ma arag shaqsi Soomaaliyeed oo ka wadanisan wuxuu mudan yahey Bilad Sharaf wadaninimo in la siiyo oo asagoo nool taalo loo dhiso.
Waa ninkii asaga iyo nin kale oo Soomaali ah aay Kenya ka difaaceen Badda aay boobka ku rabto ineey ku qaadato. Waxeey Kenya ka eryeen Shirkado Shidaal qodista oo heshiis kula galeen Badda Somalia balse markeey qoraalo dacwada u direen waxeey ku qasbeen shirkadihii ineey joojiyaan qodista sharci darrada ah.
Bashiir Mohamud hada waxaa kaliya uu dalbanayaa si Badda Somalia loo badbaadiyo in Baarlamaanka Somalia uu fariisto una Codeeyo sharciga kaliya oo Somalia aqoonsan tahey oo Badda Somalia leedahey inuu yahey Law 37.
Hadaba Baarlamaanka Somalia miyeeysan awoodin codka kaliya ineey qaadaan Bashiir hadii kaligiis uu awoodey 10 Sano inuu difaaco Badda Somalia kaligiis miyeeysan Xildhibaanada Awoodin ineey 1 maalin kaliya codka ku caawiyaan si guul dhameeystiran Somalia u gaarto.
Fadlan sii faafi Fariinta Share la wadaag Ummada Soomaaliyeed sideey u aqoonsato halyeeyga Soomaalida ilaahey ka abuurey
« Weriye Carbeed Oo Aad U Ammaanay, Geesinimana U Qiray Ilhan Cumar
Muuqaal Boqol iyo lix qof oo tahriibayaal ah kaligay baa ka soo hadhay Warayisi MURUGO LEH »